GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Cambodian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kikongo Kirundi Korean Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Maya Mizo Mongolian Myanmar Ndebele Norwegian Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese
Isiokwu a jụrụ ajụjụ ndị o nwere ike ịbụ na ị jụọla, ọ ga-egosikwa gị ebe ndị i nwere ike ịgụ na Baịbụl gị ga-aza gị ajụjụ ndị ahụ. Obi ga-adị Ndịàmà Jehova ụtọ ịkọwara gị azịza ha.
1. Ọ̀ bụ naanị otu ezigbo okpukpe ka e nwere?
Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya na e nwere naanị otu ezigbo okpukpe. Ọ dị ka ụzọ nke na-eduga ná ndụ. Jizọs kwuru banyere ụzọ ahụ, sị: ‘Ndị na-achọta ya dị ole na ole.’ (Matiu 7:14) Ọ bụ naanị ndị na-efe Chineke otú Baịbụl kwuru ka Chineke na-anabata ofufe ha. Ndị niile na-efe Chineke otú ọ chọrọ nọ n’otu okpukpe.​—Gụọ Jọn 4:23, 24; 14:6; Ndị Efesọs 4:4, 5.
2. Gịnị mere chọọchị dị iche iche ji ekwu na ha bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst?
Ndị amụma ụgha webatara ozizi ụgha n’etiti ezigbo ndị na-eso ụzọ Kraịst. Ha jikwa amụma ụgha ha na-achọ uru nke onwe ha. Dị ka Jizọs buru n’amụma, ndị amụma ụgha na-eme ka hà bụ “atụrụ” Jizọs, ma ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji. (Matiu 7:13-15, 21, 23) Ọ bụ mgbe ndịozi Jizọs nwụchara ka a bịara nwee Ndị Kraịst adịgboroja.​—Gụọ Ọrụ 20:29, 30.
3. Olee ihe ụfọdụ ndị na-efe Chineke otú ọ chọrọ kwesịrị ịna-eme?
Ezigbo Ndị Kraịst anaghị eji Okwu Chineke bụ́ Baịbụl egwuri egwu. Ha na-agbalị ibi ndụ otú Baịbụl kwuru. Ihe mere ezi okpukpe ji dị iche n’okpukpe ụgha bụ na ọ naghị eso ihe ụmụ mmadụ kwuru. (Matiu 15:7-9) Ndị na-efe Chineke ezigbo ofufe anaghị ekwu otu ihe ma na-eme ihe ọzọ.​—Gụọ Jọn 17:17; 2 Timoti 3:16, 17.
Ezigbo Ndị Kraịst na-asọpụrụ aha Chineke, bụ́ Jehova. Jizọs mere ka ndị mmadụ mata aha Chineke. O mere ka ha mara onye Chineke bụ, kụziekwara ha ka ha na-ekpe ekpere ka e doo aha Chineke nsọ. (Matiu 6:9) N’ebe i bi, olee okpukpe na-akụziri ndị mmadụ ihe bụ́ aha Chineke?​—Gụọ Jọn 17:26; Ndị Rom 10:13, 14.
4. Olee otú ị ga-esi amata ndị na-efe Chineke otú ọ chọrọ?
Ezigbo Ndị Kraịst na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke. Chineke zitere Jizọs ka o kwusaa ozi ọma Alaeze ahụ. Ọ bụ naanị Alaeze Chineke ga-egboro ụmụ mmadụ mkpa ha. Jizọs ziri ndị mmadụ ozi ọma Alaeze ahụ ruo ụbọchị ọ nwụrụ. (Luk 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kwusaa ozi ọma Alaeze Chineke. Ọ bụrụ na mmadụ bịara izi gị ozi ọma, ya amalite ịkọrọ gị banyere Alaeze Chineke, olee okpukpe ị ga-eche na ọ na-ekpe?​—Gụọ Matiu 10:7; 24:14.
Ndị na-eso ụzọ Kraịst esoghị n’ụwa ọjọọ a. Ha anaghị eso na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ọgba aghara ndị a na-enwe n’ụwa. (Jọn 17:16) Ha anaghịkwa eso ndị mmadụ eme omume ọjọọ dị iche iche ha na-eme.​—Gụọ Jems 1:27; 4:4.
5. Olee isi ihe e ji amata ezigbo Ndị Kraịst?
Ezigbo Ndị Kraịst nwere ịhụnanya pụrụ iche n’ebe ibe ha nọ. Okwu Chineke akụzierela ha na o nweghị agbụrụ ha kwesịrị ịkpọ asị. N’agbanyeghị na okpukpe ụgha na-akwado agha ndị a na-alụ ná mba dị iche iche n’ụwa, ezigbo Ndị Kraịst anaghị eme otú ahụ. (Maịka 4:1-4) Kama ịga agha, ha na-eji oge ha na ihe ndị ha nwere enyere ndị ọzọ aka, ha anaghịkwa achọ naanị ọdịmma onwe ha.​—Gụọ Jọn 13:34, 35; 1 Jọn 4:20, 21.
Ole ndị ka ihe niile ha na-akụzi na-esi n’Okwu Chineke? Oleekwa ndị na-akụziri ndị mmadụ ihe bụ́ aha Chineke, ma na-akọrọ ha na ọ bụ naanị Alaeze Chineke ga-egboro ụmụ mmadụ mkpa ha niile? Olee okpukpe hụrụ ndị ọzọ n’anya, nke na-anaghịkwa aga agha? Ihe ndị na-eme eme gosiri na ọ bụ Ndịàmà Jehova.​—1 Jọn 3:10-12.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ihe a kọrọ n’isiokwu a, gụọ GỊnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? isi nke 15 nke akwụkwọ a Ndịàmà Jehova bipụtara.
“Ha na-ekwupụta n’ihu ọha na ha maara Chineke, ma ha na-agọnahụ ya site n’ọrụ ha.”​—Taịtọs 1:16
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú Ị Ga-esi Amata Ndị Na-efe Chineke Otú Ọ Chọrọ?